Ogeysiiska sharciga - Ikkaro
Ikkaro waxaa iska leh María Ángeles Franco Arce, NIF: 45799359B, oo cinwaankiisu yahay, Sagunto, 46500, Valencia, Spain.
emaylka ikkaroweb (at) gmail (dhibic) com
telefoonka (+34) 645 134 539
Faahfaahinta xiriirka qofka masuulka ah: María Ángeles Franco Arce oo leh emayl lala xiriiro ikkaroweb (at) gmail (dot) com
Sida loo adeegsado xuquuqdaada: Waxaad u diri kartaa xiriir qoraal ah xafiiska diiwaangashan ee María Ángeles Franco Arce ama cinwaanka emaylka ee ku xusan cinwaanka ogeysiiskan sharci, oo ay ku jiraan labada xaaladoodba nuqul ka mid ah aqoonsigaaga ama dukumiinti kale oo aqoonsi oo la mid ah, si aad u codsato adeegsiga xuquuqda soo socda:
Xaq u lahaanshaha helitaanka macluumaadka shakhsiga: waxaad weydiin kartaa María Ángeles Franco Arce haddii shirkaddan ay daweyneyso xogtaada.
Xaq ayaad u leedahay inaad codsato xaddidaadda daaweyntaada, haddii ay sidaa tahay waxaa hayn doona oo keliya María Ángeles Franco Arce layliga ama difaaca sheegashooyinka.
Xuquuqda diidmada daaweynta: María Ángeles Franco Arce waxay joojineysaa ka baaraandegidda xogta qaabka aad tilmaamtay, ilaa sababo macquul ah oo qasbaya ama jimicsiga ama difaaca sheegashooyinka suurtagalka ah ay tahay inay sii wadaan howshooda.
Xuquuq u lahaanshaha xogta: haddii ay dhacdo inaad rabto in xogtaada ay ka shaqeyso shirkad kale, María Ángeles Franco Arce ayaa fududeyn doonta u-qaadista xogtaada qofka cusub ee mas'uulka ka ah.
Sida loogu dacwoodo Hay'adda Xakamaynta: Haddii aad u aragto inay dhibaato ka jirto habka ay María Ángeles Franco Arce u maamusho xogtaada, waxaad u gudbin kartaa sheegashadaada Madaxa Amniga María Ángeles Franco Arce (kor lagu tilmaamay) ama hay'adda ilaalinta xogta taas oo u dhiganta, ahaanshaha Hay'adda Isbaanishka ee Ilaalinta Macluumaadka, midka lagu tilmaamay kiiska Spain.
Xogta isticmaale ee ay soo gelisay María Ángeles Franco Arce bogagga iyo boggaga shabakadaha bulshada: Laga soo bilaabo marka isticmaalehu bixiyo ogolaanshahooda ilaa ay ka noqdaan.
María Ángeles Franco Arce waxay ogolaatay inay isticmaasho xogta, si ixtiraamaan sirtooda iyo inay u adeegsadaan si waafaqsan ujeedadooda, iyo sidoo kale inay u hogaansamaan waajibaadkooda ah inay ilaashadaan isla markaana ay la qabsadaan dhammaan tallaabooyinka si looga fogaado isbeddel, lumis, daaweyn ama marin aan loo idmanayn, iyadoo la raacayo qodobbada Xeerka Boqortooyada ee 1720 / 2007 ee Diseembar 21, oo ansaxineysa Xeerarka horumarinta Sharciga Dhaqanka 15/1999 ee Diisambar 13, ee ku saabsan Ilaalinta Xogta Shakhsiyeed.
Intaa waxaa sii dheer, waa inaad xogtaada cusbooneysiisaa marwalba, adoo mas'uul ka ah khaladka ama been abuurka xogta la bixiyay iyo waxyeelada ay tani u geysan karto María Ángeles Franco Arce oo ah milkiilaha boggan, ama dhinacyada saddexaad in loo isticmaalo ayaa sheegay.
María Ángeles Franco Arce waxay qaadataa tallaabooyin nabadgelyo oo macquul ah oo macquul ah si loo ogaado jiritaanka fayrasyada, weerarrada xoogga leh iyo cirbadaha koodhka.
Si kastaba ha noqotee, waa inaad ogaataa in tallaabooyinka amniga ee nidaamyada kombiyuutarka ee internetka aysan gebi ahaanba la isku halleyn karin taasna, sidaa darteed, María Ángeles Franco Arce ma damaanad qaadi karto maqnaanshaha fayrasyada ama walxaha kale ee sababi kara wax ka beddelka nidaamyada kombiyuutarka (software-ka iyo qalabka) isticmaalaha ama dukumiintiyada elektaroonigga ah iyo faylalka ku jira.
Haddii farqi kasta la ogaado, María Ángeles Franco Arce ayaa ballanqaadaysa ogeysii isticmaalayaasha ugu badnaan 72 saacadood.
Webka iyo martigelinta: Websaydhku wuxuu leeyahay SSL TLS v.1.2 encryption kaas oo u oggolaanaya dirista macluumaadka shakhsiga ah ee aaminka ah iyada oo loo marayo foomamka xiriirka caadiga ah, oo lagu martigeliyey server-yada María Ángeles Franco Arce ay ka kireysatay Banahosting.
Xogta laga soo ururiyey shabakadda: Xogta shakhsiga ah ee la soo ururiyey waxay ku xirnaan doontaa farsameyn otomaatig ah waxaana lagu dari doonaa faylasha u dhigma ee ay leedahay María Ángeles Franco Arce.
Foomka wax iibsiga: Si loo helo badeecadaha iyo adeegyada lagu bixiyo bakhaarradeenna internetka, isticmaaluhu wuxuu leeyahay foom iibsi oo ku xiran shuruudaha qandaraaska ee lagu qeexay siyaasadeena halka lagala xiriiri doono iyo macluumaadka lacag bixinta. Xogta waxaa lagu keydiyay server-yada Banahosting.
Foomamka ku-qoridda joornaalka: María Ángeles Franco Arce waxay isticmaashaa adeega warsidaha Sendgrid, Feedburner ama Mailchimp ee kaydiya xogta emaylkaaga, magacaaga iyo aqbalaada rukumashada. Waad ka saamixi kartaa joornaalka wakhti kasta adoo maraya xiriiriye gaar ah oo ku yaal salka alaab kasta oo aad hesho
Fariin deg deg ah: María Ángeles Franco Arce kuma bixiso adeeg fariin deg deg ah, sida WhatsApp, Facebook Messenger ama Line.
Bixiyeyaasha adeegga lacag-bixinta: Adoo adeegsanaya shabakada, waxaad ka heli kartaa, xiriiriyeyaasha, degellada websaydhka-saddexaad, sida PayPal o karbaash, si loo bixiyo lacag bixinta adeegyada ay bixiso María Ángeles Franco Arce. Marnaba shaqaalaha María Ángeles Franco Arce ma helaan marinka bangiga (tusaale ahaan, nambarka kaarka deynta) ee aad siiso dhinacyada saddexaad.
Jiritaanka shabakadaha: María Ángeles Franco Arce waxay leedahay xog-qoraalo ku saabsan qaar ka mid ah shabakadaha bulshada ee ugu waaweyn internetka.
Ujeedo iyo sharciyeyn: Daaweynta ay María Ángeles Franco Arce ku fulin doonto xogta ka dhex jirta mid kasta oo ka mid ah shabakadaha kor lagu soo sheegay waxay noqon doontaa, ugu badnaan, mid ay shabakadda bulshadu u oggolaanayso astaamaha shirkadaha. Sidaa darteed, María Ángeles Franco Arce ayaa awood u yeelan doonta inay ku wargeliso, marka sharcigu uusan mamnuucin, taageerayaasheeda si kasta ha noqotee in shabakada bulshada ay u ogolaato waxqabadkeeda, bandhigyada, dalabyada, iyo sidoo kale bixinta adeeg macaamiil shaqsiyeed.
Soo saarida xogta: Marnaba María Ángeles Franco Arce kama soo saari doonto xogta shabakadaha bulshada, ilaa ogolaanshaha isticmaalaha si gaar ah oo cad loo helo in sidaas la sameeyo.
Xuquuqda: Marka, sababo la xiriira dabeecadaha shabakadaha bulshada, jimicsiga wax ku oolka ah ee xuquuqda dhowrista xogta ee raaciyaha ay ku xiran tahay wax ka beddelka muuqaalka shakhsiga ah ee tan, María Ángeles Franco Arce ayaa kaa caawin doonta oo kugula talin doonta inaad tan dhamaadka illaa xadka fursadahaaga.
Emayl. Adeegga emaylka ee María Ángeles Franco Arcese ayaa bixiya adeegsiga adeegyada Sendgrid.
Baraha bulshada. María Ángeles Franco Arce waxay adeegsaneysaa shabakadaha bulshada Mareykanka ee YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Flipboard oo loo gudbiyo xog wareejin caalami ah, dabeecad gorfeyn iyo farsamo la xiriirta websaydhka, iyadoo ku jirta adeegeeda halka María Ángeles Franco Arce waxay daaweyneysaa xogta iyaga, iyaga, adeegsadayaasha, macaamiisha ama baareyaasha u gudbiyaan shirkadda María Ángeles Franco Arce ama la wadaagto.
Bixiyeyaasha lacag bixinta. Si aad wax uga bixin karto PayPal o karbaash, María Ángeles Franco Arce ayaa u diri doonta xogta adag ee lagama maarmaanka u ah kuwa kuwaan lacag-bixiyayaashan lacag-bixinta ah si ay u soo saaraan dalab bixinta u dhiganta.
Laga soo bilaabo marka aad iska diiwaangeliso isticmaale ahaan degelkan, María Ángeles Franco Arce waxay marin u leedahay: Username iyo email, cinwaanka IP, cinwaanka boostada, ID / CIF iyo macluumaadka lacag bixinta.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, María Ángeles Franco Arce waxay xaq u leedahay inay wax ka bedesho, waqti kasta iyo ogeysiis la'aan, laakiin ku wargalinta, soo bandhigida iyo qaabeynta websaydhka sida ogaysiiskaan sharciga ah.
Markaad isticmaaleyso degelkan, isticmaaluhu wuxuu oggol yahay inuusan sameynin dhaqan kasta oo dhaawici kara sawirka, danaha iyo xuquuqda María Ángeles Franco Arce ama dhinacyada saddexaad ama waxyeellayn kara, curyaamin kara ama culeys saari kara bogga ama ka hor tagi kara, xaalad kasta, isticmaalka caadiga ah ee shabakadda.
Xayeysiisyada La Isboonsariyay, Xiriirada Ku Xidhan, iyo Xayeysiinta
Waxaan bixinaa waxyaabaha la kafaala qaaday, xayeysiinta iyo / ama xiriiriyeyaasha ku xiran. Macluumaadka ka muuqda xiriiriyeyaasha xiriirka la leh ama xayeysiinta la geliyay waxaa bixiya xayeysiistayaasha laftooda, Annagu mas'uul kama nihin khaladaadka suurtagalka ah ama khaladaadka ay xayeysiisyada ku jiri karaan, sidoo kale kuma dammaanad qaadayo khibradda, daacadnimada ama mas'uuliyadda xayeysiistayaasha ama tayada wax soo saarkooda iyo / ama adeegyadooda.
Ogeysiiska Sharciga ee Kuxiran Amazon
Waxaan sidoo kale kugu wargalinayaa in ka mid ah xiriiriyeyaasha xiriirka la leh ee aad ka heli karto balooggan qaar ka mid yihiin laga bilaabo barnaamijka ku-xirnaanta Amazon (taas oo aan ka mid ahay), sidaa darteed waxaa waajib igu ah inaan ku ogeysiiyo ogeysiiskan ka socda Shirkadaha Amazon, oo si kooban u sharraxaya inaanan mas'uul ka ahayn wixii khaldan ee laga yaabo inay ku jiraan macluumaadka lagu soo bandhigay bogga Amazon (magaca sheyga , sharaxaad, sicir, helitaan, iwm.):
"Qiimaha iyo helitaanka badeecadu waa sax sida taariikhda / waqtiga la tilmaamay waana la beddeli karaa. Qiimo kasta iyo macluumaad la heli karo oo lagu soo bandhigo goobta Amazon waqtiga la iibsanaayo waxay khuseeyaan iibsashada alaabtan."
“Qaar ka mid ah waxyaabaha ku soo baxa boggan waxay ka yimaadeen Amazon Services LLC. Waxyaabahan waxaa loo bixiyey 'sidii ay ahayd' waxayna ku xiran tahay wax ka beddel ama ka saaris wakhti kasta. "
Fikradaha lagu muujiyey iyaga daruuri kama turjumayo aragtida María Ángeles Franco Arce.
Haddii ay dhacdo in isticmaale ama dhinac saddexaad uu tixgeliyo in xadgudub lagu sameeyay xuquuqdooda aqooneed ee sharciyeed sababo la xiriira soo bandhigida waxyaabaha qaarkood ee goobta, waa inay ku wargeliyaan xaaladdan María Ángeles Franco Arce oo tilmaamaysa:
Isticmaalayaashu waxay u gudbin karaan Nidaamka Xalinta Khilaafaadka Macaamiisha taas oo María Ángeles Franco Arce ay qayb ka noqon doonto xallinta khilaaf kasta ama sheegasho ka timaadda qoraalkan ama waxqabad kasta oo María Ángeles Franco Arce, marka laga reebo in la xalliyo khilaafaadkaas sababa horumarinta waxqabadka taasi waxay ubaahantahay xubinimo, markay dhacdo isticmaaluhu waa inuu laxiriiraa hay'ada udhaxeysa ee ururka qareenada ku haboon.
Isticmaalayaasha leh xaaladda macaamiisha ama isticmaaleyaasha sida lagu qeexay qawaaniinta Isbaanishka ee degan Midowga Yurub, haddii ay dhibaato ku qabeen iibsiga khadka tooska ah ee loo sameeyay María Ángeles Franco Arce, si ay isugu dayaan inay u gaaraan heshiis maxkamadda ka baxsan taga Madasha Xalinta Khilaafaadka ee khadka tooska ah, oo ay abuureen Midowga Yurub ayna soo saareen Komishanka Yurub ee hoos imanaya Xeer (EU) 524/2013.
Isticmaalaha ayaa la ogeysiiyey, oo aqbalay, in marin u helka degelkan uusan macnaheedu ahayn, sinnaba, bilowga xiriirka ganacsi ee María Ángeles Franco Arce. Sidan oo kale, isticmaaluhu wuxuu oggol yahay inuu adeegsado websaydhka, adeegyadiisa iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay isaga oo aan ku xadgudbin sharciga hadda jira, iimaanka wanaagsan iyo nidaamka bulshada. Isticmaalka websaydhka ujeeddooyin sharci darro ah ama waxyeelo leh, ama in, si kasta oo ay tahayba, ay u geysan karto waxyeello ama looga hortago howlaha caadiga ah ee bogga waa mamnuuc. Ku saabsan waxyaabaha ku jira degelkan, waa mamnuuc:
Ujeedada kaliya ee xiriiriyayaashu waa in la siiyo Isticmaalaha suurtagalnimada helitaanka xiriidhada la sheegay iyo in la ogaado alaabtayada, in kasta oo María Ángeles Franco Arce aysan mas'uul ka ahayn kiis kasta natiijooyinka laga yaabo in laga soo qaado isticmaaleha iyada oo la adeegsanayo xiriiriyeyaasha la sheegay.
Isticmaalaha doonaya inuu aasaaso aalad kasta oo farsamo oo xiriirisa oo ka socota degelkiisa illaa bogga waa inuu helaa oggolaanshaha hore ee María Ángeles Franco Arce.
Abuuritaanka xiriirku macnaheedu ma aha xaalad kastoo jirta jiritaanka cilaaqaadka u dhexeeya María Ángeles Franco Arce iyo milkiilaha goobta xiriirku ka furmay, ama aqbalaadda ama oggolaanshaha María Ángeles Franco Arce waxyaabaha ay ka kooban tahay ama adeegyadeeda.
Sidoo kale, waxay fulinaysaa, haddaanay jirin, oggolaansho qoraal ah oo qoraal ah María Ángeles Franco Arce inay adeegsato macluumaadka ku jira websaydhka, gaar ahaan macluumaadkaaga, inaadan awoodin inaad si toos ah ama si aan toos ahayn u fuliso dhiig-miirashada ganacsiga ee waxyaabaha aad marin u leedahay .
Boggan wuxuu kaydiyaa feyl xog ah oo la xiriira faallooyinka loo diro degelkan. Waad ku dhaqmi kartaa xuquuqdaada helitaan, sixid, tirtirid ama diidmo adigoo u diraya emayl cinwaanka ikkaroweb (at) gmail (dot) com.
Boggan, boggaga la xidhiidha iyo lahaanshaha waxyaabaha ku jira waxaa iska leh María Ángeles Franco Arce.
Websaydhkani wuxuu ka kooban yahay iskuxirayaal xiriiriyeyaal u horseeda degello kale oo ay maamulaan dhinacyada saddexaad ee ka baxsan ururkeenna. María Ángeles Franco Arce ma damaanad qaadayso ama mas'uul ka tahay waxyaabaha lagu soo ururiyay bogagga la sheegay.
Haddii aan la caddeyn, oggolaanshaha hore iyo qoraalka María Ángeles Franco Arce, taranka si adag ayaa loo mamnuucay, marka laga reebo isticmaalka gaarka ah, beddelka, iyo guud ahaan nooc kasta oo dhiig-miirasho ah, iyadoo la raacayo hanaan kasta, dhammaan ama qayb ka mid ah waxyaabaha ku jira degelkan.
Waxaa si adag loo mamnuucay in la sameeyo wax isdaba marin ama wax ka beddel degelkan iyada oo aan oggolaansho hore laga helin María Ángeles Franco Arce. Sidaa awgeed, María Ángeles Franco Arce waxay qaadan doontaa mas'uuliyad kasta oo ka timaadda, ama laga yaabo inay ka dhalan karto, wax ka beddelka ama wax is daba marinta ee dhinacyada saddexaad.
Waad sameyn kartaa jimicsi, iyadoo la tixraacayo xogta la soo ururiyay, xuquuqda lagu aqoonsan yahay Sharciga Dhaqanka ee Sharciga 15/1999, ee marin u helista, hagaajinta ama baabi'inta xogta iyo mucaaradka. Sababtaas awgeed waxaan kugu wargalinayaa inaad ku adeegsan karto xuquuqdan adoo adeegsanaya codsi qoraal ah oo saxiixan oo aad u diri karto, oo ay la socoto koobi aqoonsi ah ama dukumiinti aqoonsi oo u dhigma, cinwaanka boostada ee María Ángeles Franco Arce ama emayl, ku lifaaqan koobi aqoonsi ah: ikkaroweb (at) gmail (dot) com. 10 maalmood ka hor waxaan ka jawaabi doonaa codsigaaga si aan u xaqiijino fulinta xaquuqda aad codsatay inaad fuliso.
María Ángeles Franco Arce wax dammaanad ah ma siiso mana iyadu mas'uul kama aha, si kasta oo ay ahaataba, waxyeelada nooc kasta oo ay sababi karto:
María Ángeles Franco Arce mas'uul kama aha duruufo kasta ha ahaate ee waxyeelada ka dhalan karta adeegsiga sharci darrada ah ama aan habbooneyn ee boggan.
Guud ahaan, xiriirka ka dhexeeya María Ángeles Franco Arce iyo isticmaaleyaasha adeegyadeeda telematic, ee ku jira degelkan, waxay ku xiran yihiin sharciga Isbaanishka iyo xukunkiisa.
Isticmaaluhu wuxuu cadeynayaa in lagu wargaliyay shuruudaha ilaalinta macluumaadka shakhsiga ah, aqbalaada iyo ogolaanshaha daaweynta ee María Ángeles Franco Arce, qaab ahaan iyo ujeedooyinka lagu muujiyey siyaasadan asturnaanta.
Iyadoo la raacayo sharciga hadda jira, María Ángeles Franco Arce ma fuliso dhaqamada SPAM, sidaa darteed ma dirto emayl ganacsi oo aan horey loo weydiisan ama loo oggolaan isticmaalaha. Sidaa awgeed, mid kasta oo ka mid ah foomamka ku jira shabakadda, Isticmaaluhu wuxuu fursad u leeyahay inuu siiyo oggolaanshahooda cad ee uu ku helayo Warsidaheena / Bulletin, iyadoo aan loo eegin macluumaadka ganacsi ee waqtiga la codsaday.
1 faallo ku saabsan «Ogeysiis sharci»
27-ka May, 2020 saacaddu markay tahay 6:58 pm
mahadsanid shey wanaagsan oo dadka ka dhiiri galiya malabka ……